DMC-TZ80 Lumix Digital Camera - Panasonic
LUMIX Digital Camera DMC-TZ80
4K နှင့်ဖြစ်သော 30x Zoom ခရီးသွားကင်မရာ
အိတ်ကပ်အရွယ်အစားသာရှိသော ဤကင်မရာကို သင်နောက်တစ်ခါ ခရီးသွားလျှင် ယူသွားပါ။ ၄င်း၏ အားကောင်းသော 30x zoom lens နှင့် 4K Video/Photo ရိုက်ကူးခြင်းဆောင်ရွက်ချက်များသည် သင်အား ခရီးသွားလာသည့် အမှတ်တရများကို သင်လိုချင်သည့် ပုံစံအတိုင်းအတိအကျ သိမ်းဆည်းစေနိုင်ပါသည်။
အိတ်ကပ်အရွယ်အစားသာရှိသော 30x Zoom ခရီးသွားကင်မရာ
LUMIX TZ80 အသစ်သည် ခရီးသွားလာခြင်းအတွက် အိတ်ကပ်ထဲသို့ လွယ်ကူစွာ ဝင်ရောက်နိုင်ပါသည်။ ၄င်း၏ကျစ်လစ်ပြည့်စုံသော အရွယ်အစားနှင့်ပင် TZ80 တွင် မရှိမဖြစ်သော အလွန်အမင်း zoom ချဲ့ခြင်းမှ Panasonic ၏ နောက်ဆုံးပေါ် 4K ဗီဒီယို / ဓာတ်ပုံ နောက်ဆုံးပေါ် နည်းပညာထိ ခရီးသွားများအတွက် ဆွဲဆောင်မှုရှိသော functions များ တစ်ပုံတစ်ခေါင်း ပါဝင်ပါသည်။ ရှုပ်ထွေးသော ရှုခင်းဓာတ်ပုံများမှ ဝေးကွာသောအရာဝတ္ထုများနှင့် ကောက်ကာငင်ကာရိုက်ကူးချက်များအထိ အသေးစိတ်ကို ယူဆောင်လာနိုင်ပါသည်။ ခရီးသွားမှတ်တမ်းအားလုံးကို ရိုက်ကူးထားပြီး သင်လိုချင်သောပုံစံအတိအကျအတိုင်း ၄င်းတို့ကို သိမ်းဆည်းထားပါ။
အလင်းရောင်နည်းသော အခြေအနေများတွင် မြင့်မားသော ဓာတ်ပုံအရည်အသွေး ရရှိနိုင်ခြင်း
18.1-megapixel ရှိသော အာရုံခံနိုင်စွမ်းမြင့်မားသည့် MOS sensor နှင့် Venus Engine (LUMIX ၏ နောက်ဆုံးပေါ်စနစ် ကင်မရာများနှင့်ပင် တူညီသော အင်ဂျင်ရှိသည်) ဖြင့် မှိန်ပြသော ပတ်ဝန်းကျင်များတွင်ပင် အံ့အားသင့်ဖွယ်ကောင်းသော ဓာတ်ပုံများကို ရိုက်ကူးနိုင်ပါသည်။
RAW format နှင့် ရိုက်ကူးလျှင် ပိုပြီး အသေးစိတ်သည့်အရာများကို ရိုက်ကူးနိုင်ပါသည်။ ရုပ်ပုံအချက်အလက်သည် အနည်းဆုံးသော ဆောင်ရွက်ချက်ဖြင့် sensor မှ ဖမ်းယူသော မူလအရောင်နှင့် အလင်းအကြောင်းအရာများကို ထိန်းသိမ်းပါသည်။ ယခုဆိုလျှင် သင့်အနေဖြင့် ထိုအရည်အသွေးမြင့်ဓာတ်ပုံများကို တိုက်ရိုက်တည်းဖြတ်နိုင်ပြီး ထွက်ပေါ်လာသည့် ရလာဒ်များအတွက် အံ့အားသင့်နိုင်ပါသည်။
30x zoom LEICA DC lens ဖြင့် ပိုမို နီးနီးကပ်ကပ်ဆွဲလိုက်ပါ။
LUMIX TZ80 သည် ဆောင်ရွက်ချက်တစ်ခုသည်နှင့် ထိုလုပ်ဆောင်ချက်အား ချက်ချင်းပြုလုပ်ပါသည်။ 24mm LEICA DC VARIO-ELMAR lens တွင် 30x optical zoom* ရှိပြီး သင့်စိတ်ဝင်စားမှုကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည့်အရာများအား အတွင်းကျကျကြည့်ရှုနိုင်မှုနှင့်အတူ ၄င်းအား ရိုက်ကူးထားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
* 35mm ကင်မရာနှင့် ညီမျှသော - 24-720mm.
4K ဓာတ်ပုံနှင့် အခိုက်အတန့်များကို မလွဲချော်နိုင်တော့ပါ
LUMIX TZ80 တွင်ရှိသော 4K နည်းပညာဖြင့် 4K PHOTO ဓာတ်ပုံသည် 30fps နှင့် အကောင်းဆုံးအခိုက်အတန့်များကို ဖမ်းယူစေနိုင်ပြီး ရိုက်ကူးပြီးသည့်နောက်တွင်လည်း အကောင်းဆုံးဓာတ်ပုံကို ရွေးချယ်စေနိုင်ပါသည်။ိရိုက်ပါ၊ ရွေးချယ်ပြီး သိမ်းဆည်းပါ။ LUMIX TZ80 တွင် ရှိသော 4K PHOTO အနေအထားဖြင့် အခိုက်အတန့်များကို မလွဲချော်အောင် ပြုလုပ်လိုက်ပါ။
4K Video. ဘဝအား ရွှန်းလဲ့စွာ အသေးစိတ်ဖော်ပြခြင်း
4K Video ၏ အံ့အားသင့်ဖွယ်ကောင်းသော စွမ်းအားဖြင့် LUMIX TZ80 သည် သင့်အား Full HD ၏ လေးဆထိရှိသော အရည်အသွေးဖြင့် သင့်ခရီးကို မှတ်တမ်းတင်စေနိုင်ပါသည်။ တစ်ဖန်ပြီးတစ်ဖန် ပြန်လည်ကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက် ပိုမိုစိတ်လှုပ်ရှားမှု၊ ပိုမိုအသေးစိတ်မှုနှင့် ပို၍ပင်များပြားသော အမှတ်တရများ
Light Composition function သည် ပိုမိုတောက်ပသော အစက်အပြောက်ရှိသည့်ဓာတ်ပုံများကို ရွေးချယ်ပြီး သိမ်းဆည်းခြင်းဖြင့် ဓာတ်ပုံများကို ဖန်တီးပါသည်။ ၄င်းသည် မီးပန်းဖော်ခြင်း သို့မဟုတ် ညမြင်ကွင်းကဲ့သို့သော တန်ဖိုးကြီးပြီး ထူးခြားသော ဓာတ်ပုံများကို ကင်မရာဖြင့် လွယ်လွယ်ကူကူ ရိုက်ကူးနိုင်စေပါသည်။
4K Live Cropping သည် ယခင်တုန်းက ရိုက်ကူးရန်ခက်ခဲခဲ့သည့် ထူးခြားသော ဗီဒီယို ခံစားမှုများကို ရှိက်ကူးစေနိုင်ပါသည်။ ကင်မရာသည် တည်ငြိမ်သော အနေအထားတစ်ခုကို ထိန်းသိမ်းထားစဉ်တွင် ရိုက်ကူးသည့်ဖရိန် သာ ရွေ့လျားပါသည်။ ၄င်းသည် တစ်ဖက်ဖက်သို့ အလျဉ်မပြတ်ဆွဲကာရိုက်ခြင်းကို ခွင့်ပြုပြီး ဓာတ်ပုံ၏ အလယ်တည်နေရာတွင်မရှိသော အရာဝတ္ထုကို zoom ဆွဲစေနိုင်ပါသည်။
ယခုရိုက်လိုက်ပါ၊ နောက်မှ focus ပြုလုပ်ပါ
သင်ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးသည့် နောက်တွင်ပင် focus ထဲသို့ ထည့်လိုသည့် အရာအား အတိအကျဆုံးဖြတ်နိုင်ခြင်း အခြေအနေကို စိတ်ကူးယဉ်ကြည့်ပါ။ LUMIX TZ80 တွင်ပါဝင်သော Post Focus function သည် သင့်အား ထိုသို့လုပ်ဆောင်နိုင်စေပါသည်။ြ့မင်ကွင်းကိုရိုက်ကူး၊ ဓာတ်ပုံကိုပြန်လည်ကြည့်ရှုပြီး သင်ခဲထိုးလိုသောအပိုင်းကို နှိပ်လိုက်ပါ။ ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းသည် ရိုးရှင်း၊ အံ့အားသင့်စရာကောင်းပြီးတော့ LUMIX TZ80 အတွင်းမှာပင် ပြုလုပ်ရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ပိုမိုသင်ယူရန်
တစ်ခါတစ်ရံ နေရောင်ခြည်ပြင်းထန်လွန်းခြင်းက အတောက်ပဆုံးကင်မရာများကိုပင် မြင်ရခက်စေပါသည်။ LUMIX TZ80 တွင် Live View Finder ပါဝင်ပြီး ၄င်းဟာ ကင်မရာကို သင့်မျက်လုံးနားသို့ ပင့်တင်လိုက်လျှင်အလိုအလျှောက် ပွင့်သောကြောင့် သင့်အနေဖြင့် အသေးစိတ်ကိုမြင်ရပြီး သင်ရှာဖွေနေသည်ကို ရိုက်ကူးလိုက်ပါ။
ထိန်းချုပ်သောအကွင်းကလည်း သက်တောင့်သက်သာရှိတဲ့ ထိန်းချုပ်မှုကို ပေးပါတယ်။ အလင်းဝင်ပေါက်၊ shutter အမြန်နှုန်း၊ zoom နှင့် focus ကို ကိုယ်တိုင်လွယ်လွယ်ကူကူ ထိန်းချုပ်နိုင်စေခြင်းအပြင် သင့်အကြိုက်ဆုံးဆက်တင်ရရှိအောင် စိတ်ကြိုက်ချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်။
High speed auto-focusing with DFD နည်းပညာဖြင့် မြန်နှုန်းမြင့် အလိုအလျှောက် focus ပြုလုပ်ခြင်း
Panasonic ၏ Depth From Defocus (DFD) Auto Focus (AF) နည်းပညာသည် frame အတွင်းရှိ အရာဝတ္ထုများကြား အကွာအဝေးကို ချက်ချင်းတွက်ချက်ပြီး lens ၏ focus အား လျှင်မြန်သည့် ဆက်တိုက်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုတည်းဖြင့် ရရှိစေနိုင်ပါသည်။ ၄င်းသည် အထိရှိသည့် ပိုမိုလျှင်မြန်သော AF အမြန်နှုန်းနှင့် AFC5fps ရှိသော ဆက်တိုက်ရိုက်ကူးသည့် အမြန်နှုန်းကို ရရှိစေပါသည်။ ၄င်းသည် ဗီဒီယို ရိုက်ကူးစဉ်တွင်လည်း ဆက်တိုက် focus ပြုလုပ်ခြင်း၏ တည်ငြိမ်မှုကို တိုးမြှင့်စေပါသည်။
အလင်းရောင်နည်းသော အခြေအနေများတွင် focus ပြုလုပ်ခြင်း
အလင်းရောင်နည်းသော AF အား လရောင်အောက်တွင်ပင် AF အထောက်အကူပြုမီး မပဲပါ ရိုက်လိုသည့်အရာပေါ်တွင် ပိုပြီးတိတိကျကျ focus ပြုလုပ်နိုင်စေရန် ထည့််သွင်းထားပါသည်။ ထို့ပြင် LUMIX TZ80 သည် ပိုမိုသေးငယ်သော AF ဇုန်အတွင်းတွင် ထင်းကနဲမြင်သာမှုတန်ဖိုးကို တိတိကျကျ တွက်ချက်ခြင်းဖြင့် ညကောင်းကင်ရှိကြယ်အား အလိုအလျှောက် focus ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်ရိုက်ကူးနိုင်စေရန် Starlight AF နှင့် အသစ်ပေါင်းစည်းထားပါသည်။
HYBRID O.I.S. (Optical Image Stabilizer) နှင့် 5-axis correction* ပေါင်းစည်းခြင်းသည် သင့်အား မှုန်ဝါးမှုနည်းဝါးသည့် လက်တစ်ဖက်တည်းဖြင့် ဗီဒီယိုရိုက်ကူးခြင်းကို ပေးပါသည်။
၄င်းသည့် ကင်မရာ၏ လှုပ်ရှားမှုအမျိုးအစား5ခုဖြစ်သည့် horizontal, vertical, axis of rotation, vertical rotation နှင့် horizontal rotation ကို အာရုံခံပြီး ၄င်းတို့အတွက် ပြန်ထေပေးပါသည်။
The Level Shot ဆောင်ရွက်ချက်*ဆောင်ရွက်ချက်ဟာ ရုပ်ပုံရဲ့ အလျားလိုက်လိုင်းတွေကို အာရုံခံပြီး ကင်မရာစောင်းသွားလျှင်ပင် ထိုလိုင်းတွေကို ထိန်းသိမ်းထားပါတယ်။ အပေါ်မှ ရိုက်ကူးခြင်း blind recording အခြေအနေများတွင်ပင် တည်ငြိမ်တဲ့ ဗီဒီယိုကို ရိုက်ကူးနိုင်ပါတယ်။
* HYBRID O.I.S.+ နှင့် Level Shot Function သည် 4K ဗီဒီယို မှတ်တမ်းတင်မှုတွင် အလုပ် မလုပ်ပါ။
POST FOCUS က ဘာလဲဆိုတာ စမ်းသုံးကြည့်လိုက်ပါ
POST FOCUS သုံး၍ ဓာတ်ပုံများ ရိုက်ထားပြီးနောက် မိမိနှစ်သက်သည့် အပိုင်းအတွက် FOCUS ပြန်သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။